Guqula i-KDE yakho ibe yi-Elementary KDE | Kusuka kuLinux
Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungayiguqula kanjani i-KDE4 ibe yi-Pantheon QT / KDE4. Okokuqala sifaka amaphakheji adingekayo:
I-Distro esekwe ku-dDebian
Isikhathi nesifiso sokwenza 🙂
Ungangeza amakhosombe alandelayo
Kuphakathi kokusebenzisa i-.deb (KUVUSELELWE KAKHULU):
Siyafaka Iplanki noma elinye idokhu (Isibonelo i-docky noma ungasebenzisa iphaneli njengedokhi).
Uma sekufakiwe sifaka iPlank ku-autostart (i-docky noma i-dock yakho)
Sengeza iphaneli entsha engenalutho:
Sifaka ingqikithi yokuhlobisa iwindi: Elementary Luna bese siyisebenzisa
Sifaka ingqikithi ye-plasma: Caledonia / Wave Remix Opaque noma oyithanda kakhulu 😉
Manje sivula i-terminal, sisebenzise i-nano (i-Nano evela ku-Gnu, hhayi i-Nano evela ku-<»Linux xD) bese sibeka okulandelayo:
[Ukungena Kwideskithophu] Inguqulo = 1.0 Uhlobo = Igama Lesicelo = isihlibhi Exec = isiqalisi slingshot% U Icon = isihlilingi-isiqalisi iTheminali = amanga
futhi siyigcina njenge-slingshot-launcher.desktop
Siyidonsela kuphaneli bese sishintsha isithonjana siye kwesikuthanda kakhulu - sengeza iwashi, izikhala ezintathu nezinkomba, ukuze kubukeke kanjena:
Sisusa iphaneli elingezansi bese sivula ichweba lethu:
Futhi ukusuka lapho akukho okunye ongakusho, kwenze ngokwezifiso zakho; P.
Nguyiphi imvelo ye-xfce noma i-kde oyithande kakhulu? Vota: http://strawpoll.me/707301
Izinzuzo ze-KDE Pantheon:
Nezinye izinto eziningi ...
Okuthunyelwe lapho ngifundisa khona ukuthi ngikwenza kanjani ngeXfce: https://blog.desdelinux.net/que-hacer-despues-de-instalar-elementary-os-0-2-luna/
ungakhohlwa ukuvota engikuthumele!: http://strawpoll.me/707243
Lokhu okuthunyelwe kunikezelwe ku- @ eliotime3000 (nani nonke!) Ukuguqula i-KDE yakho ibe yi-Pantheon xD
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Guqula i-KDE yakho ibe yi-Elementary KDE
Kuhle kakhulu! Manje kukhona i-Elementary KDE. Endabeni yami, ngingenza isitayela se-Elementary logo "K" ukwenza ukwakheka kwe-Elementary KDE.
Umphumela ubonakala ulungile kimi, kepha ngikhetha kakhulu ngemininingwane .. nezimpawu zethreyi azibukeki zilungile 🙁
Noma kunjalo, isitayela sakho se-Elementary KDE singcono kakhulu kunathi.
Noma kunjalo, ngijwayele isitayela seWindows, kepha ngiyethemba iPlank ayiphazamisi ukusebenza kwedokodo lomsebenzi we-KDE.
Eqinisweni nginephrojekthi engqondweni: ukudala itimu eyisisekelo ye-KDE namanye amaphrojekthi athakazelisa kakhulu, into embi izifundo zami ¬_¬ ezithatha isikhathi sami futhi zingangivumeli i-linux. (I-PS: Namuhla nginenhlanhla yokubuyela ekhaya kusenesikhathi, oh nangendlela engikuthanda ngayo: DD)
Niphambene kakhulu ngemininingwane, ngine-Acute Versionitis. Sonke sinokukhubazeka. i-xD
U-Elav ukhetha kakhulu ngemininingwane, yingakho usebenzisa i-LibreOffice enezithonjana ezithile zikanokusho nokulungiswa kwebha yamathuluzi okulingisa iHhovisi 2003.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu !! Kubukeka kukuhle kakhulu ku-KDE kepha iphaneli ephezulu ichitha konke, ngithanda iphaneli yeXFCE kangcono.
I-KDE isabanda kakhulu futhi ingenza ngibe ngcono ukwenza ngokwezifiso i-KDE ukufaka i-ElementaryOS futhi ngenze ukungcola kokufaka izinto (kimi uqobo). Lapho sengibuyise i-netbook lami (engivele ngilikhumbule 🙁) ngizoqhubeka nalokhu kepha okubi ukuthi ngine-OpenSUSE KDE ngakho ngicabanga ukuthi kukhona engizokulwa nakho.
Ukunambitha imibala kepha angiziboni ngifaka ku-KDE idokodo eliyinqaba lalabo abangaphandle lapho abanamapaneli e-plasma
Kungakho ngithe: "noma ungasebenzisa iphaneli njengedokhi"
Ngisebenzisa i-KDE nge-Docky kukhompyutha yami ephathekayo. Kungukuthi iphaneli alinawo umthelela ofanayo kimi, angikwazi ukulibeka kwimodi ye-3D njengoba ngithanda ...
ngendlela, iLinux Mint 16 RC iphumile
Izithonjana zefonti ne-taskbar ziyavela emehlweni. i-xD
Nanku umzamo wami ku-KDE eyisisekelo usebenzisa amathuluzi we-KDE uqobo.
okuthunyelwe okuhle kakhulu, noma ngingathanda ukuthi basuse i-kde yamabanga aphansi
manje kuphela i-lxde ezobe ilahlekile 😛
Kungaba kuhle ukuthola isithombe lapha.
URodrigo Velasquez kusho
Sawubona sithandwa, ngingumuntu othanda i-linux kepha nginolwazi oluncane kulomhlaba, ngidlule kwamanye ama-distros futhi njengamanje ngivivinya nge-OpenSUSE 12.3 kde… umbuzo wami uwukuthi… ngingenza okufanayo ku-distro yami ??? Uma kungenzeka ukukufeza, ngizojabula ngosizo lwakho… imikhonzo evela eChile… ngiyabonga kakhulu kusengaphambili nangesikhathi eside sesoftware yamahhala !!!!
Phendula uRodrigo Velásquez
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, ideskithophu yakho ibiyinhle kakhulu.
ungatholwa umphumela ofanayo ku-openuse ???
Ingabe ikhona indlela yokubeka umbhalo esikhundleni sesithonjana noma zombili ngokuguqula ifayela le-.desktop? Uma noma ngubani eyazi indlela okungakuhle ukwazi ngayo ngoba yilokho kanye engingathanda ukukwenza.
Kepha kwenzekani? yebo i-KDE isivele yinhle
Ingabe leyo yi-XFCE (leyo evela ekuthathweni kokuqhathanisa)? Akuyona yini i-GNOME ye-Elementary OS?
Faka i-elemenatryosluna bese uqala kabusha ngakusasa ekuseni umyalezo uphume.